Ihe omimi na-enye ihe oma iji jiri Twitter na klas
Ọ gaghị adị njọ ikwu na Twitter bụ otu n'ime ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi kachasị ama ma dị egwu. Ọ bụ netwọk dị ịrịba ama na ọtụtụ ngwaọrụ iji nyere ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ aka ijikọta.
Ka ọ dị ugbu a, Twitter aghọwo mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị ike ma a bịa n'ịzụ ahịa, nkwalite saịtị, ihe na-abụghị uru, ihe omume, na agụmakwụkwọ. N'ebe a, Andrew Dyhan, Semalt Onye ọrụ ahịa nke Semalt, ekwuwo banyere ụzọ ndị dị ịrịba ama iji Twitter na klas na ụzọ dị mma.
Ihe Omume Ụlọ Nzukọ na Nkwupụta
Otu n'ime uru ndị kasị mma na nke dị ịtụnanya n'iji Twitter na klas ahụ bụ na ọ na-eme ka ihe omume klas na ọkwa dị mfe na ngwa ngwa. Ị nwere ike ịkekọrịta ozi gbasara ihe ndị na-abịanụ, ule, nyocha, na ihe niile ị na-eche dị mkpa maka ụmụ akwụkwọ - desktop teleprompter. Ịnwere ike iji Twitter iji bipụta ọrụ, ọrụ, na ihe omume pụrụ iche na ntanetị. Enwere ike ikwuputa ụbọchị nke ule site na saịtị mgbasa ozi a. Ụmụ akwụkwọ ochie nwere ike ịchọta ụmụ akwụkwọ ọhụrụ, ha niile nwere ike ikwurịta okwu site na ibe na Twitter.
Na-akwado Mkparịta ụka Na-aga n'ihu
Ndị nkụzi anyị na ụmụ akwụkwọ anyị nwere ike ịkwalite mkparịta ụka na-aga n'ihu na Twitter ozugbo oge gafechara, nke a ga-enyere ndị ọhụrụ aka ịmụta ọtụtụ ihe ọhụrụ. ị ga - enwetakwa ike ịchọta akwụkwọ na vidiyo ndị a na - eme ka ndị nkụzi mara ihe niile banyere ezughị okè ha nakwa nsogbu nke ụmụ akwụkwọ.
Nlekota Ubi Oru
Ụmụ akwụkwọ na-eto eto nke na-agagharị ọrụ dị iche iche na ubi nwere ike ịchọta ozi na ọdịnaya dị mkpa na Twitter. Maka ndị nkụzi, ọ dị mfe ịkekọrịta ihe bara uru na ntanetị iji nwee ike inweta ọtụtụ ụmụ akwụkwọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị nwere ike ikwu na Twitter bụ ụzọ kachasị mma iji soro ndị nkuzi gị ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ nwee mmekọrịta iji nwee ike inyere ibe gị aka ịhọrọ ọrụ kwesịrị ekwesị. Site na Twitter, ndị nkụzi anyị nwere ike ịkụzi ụmụ akwụkwọ ha ma kesaa ọkwa ụlọ ọrụ na n'ime mpụga ogige ahụ ka ha wee nwee ike itinye akwụkwọ ha.
Egwuregwu Creative Writing
Nye ndị nkụzi, ọ dị mfe ịmepụta na ịkekọrịta ihe edere na ntanetị. Kama izigara ụmụ akwụkwọ niile ọrụ niile, ndị nkuzi anyị nwere ike ibudata ha na Twitter ka ụmụ akwụkwọ na-apụ na-amụtakwara ihe ọhụrụ site na mmemme ndị a. Gwa ụmụ akwụkwọ ahụ ka ha soro na mmemme ndị a n'ime na n'èzí klas, ma mee ka ha dị na Facebook na Twitter. Jide n'aka na i tinyela ihe nhicha kwesịrị ekwesị na tweets ka ọdịnaya gị dị na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ.
Ịde blọgụ na Social Media
Ndị nkuzi anyị nwere ike ịkụziri ụmụ akwụkwọ ha otu esi enweta ego online site na Twitter. Ọ bụ nnukwu ikpo okwu iji kesaa gị blog posts ma na-eme ka ọtụtụ na ndị ọzọ. Na Twitter, ọ dị mkpa ide akụkọ dị irè nke na-agba ndị mmadụ ume ka ha soro na klas gị n'ịntanetị na nke offline.